I-Rivers Bend-i-RRG tub eshushu! Akukho ntlawulo yokucoca okanye isilwanyana sasekhaya! - I-Airbnb
I-Rivers Bend-i-RRG tub eshushu! Akukho ntlawulo yokucoca okanye isilwanyana sasekhaya!
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguScott & Brittany
Wamkelekile kwindawo yakho yokubaleka ye-RRG egqibeleleyo! Ifakwe kwindawo enqabileyo yabucala yeehektare ezili-12, ngaphambili iPumpkin Bottom Campground elunxwemeni loMlambo oBomvu, iRivers Bend yindawo efana nenye! Ukuhamba umgama ukuya kwezona ndlela zihamba phambili kwintlambo, ukuloba, ukukhwela inqanawa, ukukhwela iphenyane, ukunyuka okanye ukuphumla nje kwi-tub eshushu kukho into yakhe wonke umntu! Ukusuka kwi-nostalgic creaking yomnyango wesikrini, ukuya kwisandi somlambo, le ndawo iqinisekisiwe ukudala iinkumbulo ezingapheliyo. Akukho ntlawulo yokucoca!
I-Rivers Bend sele ikwintsapho enye iminyaka eyi-50nangaphezulu. Ngenxa yokuhlaziywa kwayo kwakutshanje, kwaye inikwe ubomi obutsha kunye nethuba elitsha lokuba abanye bonwabe! Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda uqhakamshelane nathi, sifuna ukunceda wonke umntu.
Sineekomityi ezikhethekileyo ezantsi ezithengiswa kule ndlu yamaplanga. I- $ 25 nganye okanye singathumela kuwe nge- $ 30!
4.79 · Izimvo eziyi-175
Ikhonkco lemephu kwa-Airbnb lisetyenziselwa iinjongo zokukhangela kuphela. IRivers Bend ibekwe phezulu nje komlambo ukusuka kwiziko leNdwendwe yeGladies eRed River Gorge.
Umbuki zindwendwe ngu- Scott & Brittany
Izimvo eziyi-4 484